Intala Ulfaa Takka Garaa Baqaysanii Daa’ima Garaa Dhaban. - NuuralHudaa
Intala Ulfaa Takka Garaa Baqaysanii Daa’ima Garaa Dhaban.
Dubbiin akkana: Dubartiin tun Amber hughes jedhamti. haadha ijoollee afuriiti. dubartiin umriin isii 21 taate tun July 2015 yeree isiin ulfa ji’a torbaaf walakkaa taatu, ciniinsifattee gara hospitaalaa geeffamte. Haata’u malee, doktoroonni dursanii yeroo isiin ulfa ji’a jahaatiin jirtu akka yowaan hospitaala deemtee deettu, akkeekkachiisa itti kennaanii turan.
Garuu eega isiin saa’a 36fi ciininsifattee, akka uumaan namuu dahutti dahaa waan hin jirreef, tarii daa’imni rakkoo godhachuu danda’a jedhanii mana qalmaa (C-Section) seenisan.
Doktoroonni, eega garaa baqassanii geessanii,waan raajii argan, hedduu rifatan. Waan himan walaalan, dhaabatanii fuula rifaatuutiin ija keessa wal laaluu eegaalan. Akkuma rifatuu doctorootaa fuula isaanii irratti argiteen, Amber rakkoon jiraachuu beeyte, akkasumaas jaarsi isii Daani’el kan jedhamus waan mudate wallaalus rakkoon jiraachuu hubatee jira.
“ Waan Hedduu nama rifachiisu ture, an gammachuun daa’ima kiyya arguuf eegaa ture, garuu rifaatuu guddoo fuula doctorootaa irraa arge, daa’ima kiyya akka dhaban natti himan” Jettee Amber.
“waan ajaa’ibaa, yeroo doctoroonni garaa baqasutti jiran Amber daa’ima akkuma Uumaa daa’imman dhalattutti dahaa turte. “Eega daqiiqaa lama guutuuf Daa’ima kiyya dhabanii booda sagalee booyinsa xiqqoo takka sarbaa kiyya biraa dhagayaaniin yoo fooxaa irraa ol raran, daa’imni kiyyaa miila tiyya lamaan jidduu ciisee jira. Ka na ajaa’ibsiise, qalma hin barbaachifne qalamuu kiyya qofa osoo hin ta’in, daa’imni kiyya ka cubbuu hin beeyne fooxaa keessa kophaa isaa turuudha” jette haati daa’imaa
Ji’a jaha eega turtee boodaa hospitaalicha irratti himannaa dhiheessitee jirti. Wanti kun akkamitti akka mudachuu danda’e deebisaa barbaada jetti. “Namni dhiifaama na gaafate hin jiru. An gama kiyyaan akkuma ijoollee tiyya ta duraa sadeen dahetti uumaan daha jedhee yaadee ture. Garuu doctoroonni daa’imni kee ufiin uf danda’ee dhalataa hin jiruu gola qalmaa seenuu qabda naan jedhan. Rifaatuu hin barbaachifne rifadhe, Naasuu gaaf sanii irraa baffachaa jira, waaqni haa galatoomu daa’imni kiyyas haala gaarii irra naaf jira. Garuu guyyaa doctoroonni daa’ima kiyya dhaban, gonkumaa dagachuu hin dandeennu” jetti amber.
October 18, 2021 sa;aa 5:34 pm Update tahe